Vaovao - [Expo an'ny olon-dehibe aziatika AAE 2020] 25-27 aogositra 2020, ivontoerana fanaovana fampirantiana sy fampirantiana ao Hong Kong
Nifarana tamim-pahombiazana tao amin'ny Foibe Fampirantiana sy fampirantiana Hong Kong ny Expo an'ny olon-dehibe aziatika (AAE). Mampivondrona fampirantiana sy marika 200 eo ho eo avy any Chine, India, Taiwan, Netherlands, New Zealand, Russia ary Etazonia. Manambatra kilalao olon-dehibe, atin'akanjo erotika, vokatra ara-pahasalamana, DBSM ary mpanamboatra sy marika hafa mifandraika amin'izany, ny AAE dia manome mpihaino matihanina karazana safidy kanto sy lamaody kanto.
Tamin'ity taona ity, manodidina ny 3.800 ireo matihanina amin'ny indostria avy amin'ny firenena sy faritra 52, mpitsidika eo amin'ny 4 800 eo ho eo no notohanan'ny mpitsidika matihanina avy amin'ny firenena sy faritra 52 samy hafa, anisan'izany i Australia, Brazil, United Kingdom, Canada, Switzerland, Chile, China, Colombia, Denmark, Egypt, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Kenya, Korea South, Macau, Mexico, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Panama, Philippines, Poland, Russia, Singapore, Sweden, Thailand, Turkey, Ukraine , Etazonia, Vietnam, Espana ary Afrika atsimo. Avy lavitra ny mpanatrika mba hividy, hanangana tambajotra, hijery ny mety ho fampandrosoana ny tsena vaovao ary hitady mpiara-miasa. Ny valin-kafatra tsara avy amin'ny fampiratiana sy ny mpitsidika raharaham-barotra dia mampiseho fa ny tambajotram-pihariana iraisam-pirenena an'ny AAE dia manome sehatra orinasa matihanina sy maharitra ho an'ny indostrian'ny olon-dehibe.
Ny fampirantiana ankoatry ny fampisehoana kilalao olon-dehibe, saribakoly olon-dehibe, fanaka fanaovana firaisana, vokatra ara-pahasalamana azo tsapain-tanana ary vokatra hafa, marika sy mpanamboatra atin'akanjo any amin'ny faritra samihafa dia nahasarika ny sain'ny mpividy maro. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nitombo ny fangatahana atin'akanjo manerantany, nanatsara ny fahatsiarovan-tena ny vehivavy ny vatany, ary ny fahalalana bebe kokoa momba ny fomba fanatsarana karazana atin'akanjo isan-karazany ny fahatokisan-tenany sy ny fiainam-pananahana. Fito 'hatramin'ny Mamatonalina, SUNSPICE, EDENKISS ... fanehoan-kevitr'ireo mpijery ara-barotra momba ireo marika mamy aseho, taratry ny mety ho vokatra azo avy amin'ny akanjo lava. Mpanamboatra manana kalitao marobe ihany koa no nampiseho vokatra toy ny corset, akanjo manaitaitra, lamba ba kiraro, akanjo baoty ho an'ny lehilahy ary fanandevozana SM.
Forum momba ny taona ho an'ny olon-dehibe AAE manerana ny kolotsaina sy indostria mifandraika amin'izany
Nanomboka ny taona 2017, ny "Future Adult Entertainment Forum" dia nanasa mpandahateny matihanina manerantany hizara ny vaovao farany momba ny teknolojia sy ny vokatra ho an'ny olon-dehibe, ny fahasalaman'ny lahy sy ny vavy, ny fironana amin'ny indostrian'ny olon-dehibe, ny haino aman-jery ary ny lalana hafa. Tamin'ity taona ity, nanasa ireo manam-pahaizana manokana momba ny indostria mifandraika amin'izany, toy ireo olo-malaza amin'ny haino aman-jery sosialy frantsay, ireo mpitsabo manokana momba ny firaisana ara-nofo sy ireo vondron'olona manampahaizana manokana momba ny vondrona ara-pahasalamana, ary ireo orinasa fanandramana iraisam-pirenena. Manomboka amin'ny "Miady hevitra momba ny fiarovana sy fanarahana ny kilalao ho an'ny olon-dehibe", "Fivoaran'ny fitaovana mifandraika", "Ahoana ny fomba marketing amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy: mpihaino sy vondrom-piarahamonina LGBT" ka hatramin'ny "Fahasalamana ara-nofo, tsiro sy fiarovana", AAE dia nandray anjara tamin'ny lafiny asa sy orinasa. ny mpitsidika dia mahatakatra ny fampahalalana mialoha ny indostrian'ny olon-dehibe.
Mitombo hatrany ny AAE miaraka amin'ny indostria, hisarika fampirantiana bebe kokoa, hanasa mpividy orinasa iraisam-pirenena bebe kokoa, ary hampiditra singa vaovao bebe kokoa, amin'ny alàlan'ny fampirantiana matihanina B2B hamoronana tontolo fifampiraharahana tsara ho an'ny mpividy sy ny mpivarotra. Ny vanim-potoanan'ny fampirantiana manaraka dia ny 25-27 aogositra 2020. Mandrapihaona any amin'ny foibe fampirantiana sy fampirantiana Hong Kong!
Silibratera Vibrator, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy, Vibrator klitoraly, Vibrator G-Spot, vibrator bitro, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ho an'ny olon-dehibe,